Milina fandavahana radial | Radial Arm Drill Press Mpanamboatra China
Eto ianao: an-trano1 / Milina fandavahana radial, fanaovan-tsolika radial arm, Press Manufacturer
Tsinfa dia mpamatsy matihanina & mpanamboatra milina fandavahana radial any Shina.
Rehefa mavesatra ny workpiece hozahana, tsy maninona ny mihetsika, ary sarotra ny mahita ny afovoany, tsy mety amin'ny fanodinana azy io amin'ny milina fandavahana mitsangana na fandavahana dabilio kely. Amin'izao fotoana izao dia ilaina ny mampiasa ny milina fandavahana radial, ny workpiece dia tsy mihetsika ary mamindra ny spindle, ka ny afovoan'ny spindle dia mifanaraka amin'ny afovoan'ny lavaka fametahana. Ny boaty spindle dia napetraka eo amin'ny sandry radial ary azo afindra amin'ny alàlan'ny lalamby fitarihan'ny sandry radial. Ny sandial radial dia azo ahodina manodidina ny axis an'ny tsanganana, noho izany dia azo ahitsy mora foana ny toeran'ny spindle. Ny sandry radial koa dia azo nakarina sy nampidinina nanaraka ny tsanganana mba hihaona amin'ny filàna fanodinana samihafa. Aorian'ny fanitsiana ny toeran'ny spindle, ny boaty spindle, ny radial arm ary ny tsanganana mijidina amin'ny milina fandavahana radial dia tsy maintsy mifatotra azo antoka miaraka amin'ny mekanisma fametahana azy ireo, mba hahafahan'ny fitaovana milina mamorona rafitra henjana mba hahazoana antoka fa ny fitaovana milina dia manana henjana sy toerana ampy. marina eo ambanin'ny asan'ny hery fanapahana.
Fanontaniana?Antsoy izahay amin'ny + 86-15318444939, ary miresaha amin'ny iray amin'ireo solontenanay manam-pahaizana.Azonao atao koa ny mameno ny contact contact
Fampidirana masinina fanodinana radial:
Ny milina fandavahana tànana radial dia ampiasaina amin'ny fandavahana, mankaleo, mitendry, casing, countersinking, famerenana amin'ny laoniny, ny fitaovana dia be mpampiasa amin'ny milina, ny famokarana bobongolo ary ny indostria hafa
Araka ny maody clamping sy ny fandefasana dia mizara ho radial mekanika sy radial hydraulic
Mihodina 360 degre ny sandry radial. Ny sandry rocker dia afaka mihetsika ambony sy ambany. Ny lohan-doha dia afaka mihetsika miankavia sy miankavanana amin'ny sandry radial mba hametrahana mora
Rafitra tsotra, mora ampiasaina.
Horonan-tsary milina fandavahana radial:
Milina fandavahana radia amidy:
Max. fandavahana savaivony:40mm
Môtô lehibe (kw): 2.2kw
Max. fandavahana savaivony:50mm
Môtô lehibe (kw): 4kw
Max. fandavahana savaivony:63mm
Môtô lehibe (kw): 5.5kw
Max. fandavahana savaivony:80mm
Môtô lehibe (kw): 7.5kw
Fitaovana fanaovan-gazety boribory radial arm:
Fampifanarahana avo lenta amin'ny spindle
Manana vy mahery ny fiaramanidina
Famolavolana lanja fototra
Ahoana ny fampiasana milina fandavahana radial
1 Fiorenana miorina. Ireo maodely ambonin'ny Z3050 dia tsy maintsy miantoka ny fototra mafy orina mba hisorohana ny risika fanariana.
2 Diovina ny menaka manohitra harafesina amin'ny fitaovana ary zahao ny habetsahan'ny menaka ao amin'ilay faritra manosotra
3 Power on, press the main power switch, power amin'ny faritra rehetra ao amin'ny milina fitaovana, miomàna amin'ny fiasan'ny milina fitaovana, vonoy ny switch, ny milina fitaovana matanjaka. Hamarino fa azo itokisana ny fitaovan'ny milina.
4 Hamarino raha marina ny fizotran'ny herinaratra amin'ny alàlan'ny bokotra mandroso sy miverina. Raha ny mifanohitra amin'izany no soloina ny tariby mandeha amin'ny herinaratra roa
5 Amboary amin'ny latabatra ny latabatra fiasa ary amboary ny workpiece. Ampidiro ny bitika fandavahana, avy eo atsangano ny halavan'ny radial amin'ny haavony irina, ahodino ny handwheel, ampifanaraho amin'ny toerany irina ny lohan-doha, araho ny sandry radial sy headtock, miankina amin'ny karazana fitaovana, amin'ny fampiasana hidy hidy na mekanika.
6 Ampiasao ny bokotra fahana amin'ny fikarakarana.
7 Ny fitaovana dia manana rafitra mangatsiaka. Ny switch switch dia hanokatra ny paompy mangatsiaka ary hanitsy ny fivoahan'ny fantsom-panafody mba hifanaraka amin'ny workpiece ho an'ny fampangatsiahana.
8. Rehefa vita ny fanodinana dia atsaharo ny fandavan'ny radial ary esory amin'ny metaly tsara sy menaka matetika ny sandan'ny radial sy ny lohan'ny torolàlana mba hisorohana ny fahasimbana.
Raha mila antontan-taratasy fiasa PDF na PPT momba ny milina fandavahana radial ianao dia mifandraisa azafady amin'ny mpiasan'ny varotra
Vidin'ny milina fandavahana radial
Momba ny vidin'ny milina fandavahana radial, araka ny maodely samihafa, miovaova be ny vidiny. Ho an'ny famaritana milina fandavahana radial mahazatra, ny elanelam-bidin'isa eo ho eo dia 3000USD ~ 50000USD. Arakaraka ny haben'ny haben'ny fividianana no mora kokoa ny vidiny. Ary hisy fiatraikany amin'ny vidiny koa ny fiovan'ny tahan'ny fifanakalozana. Raha mila vidiny marina ianao dia mila mifandray amin'ny mpivarotra raha te hahazo antoka.
Inona no atao hoe milina fandavahana radial? faritra, rafitra, singa.
Ny sary eo ankavia dia ny kisarisary an'ny milina fanaovan-tsolika radial izay misy ampahany enina indrindra:
Ampiasaina hanohanana sy hanamboarana ny fitaovan'ny milina. Ny tsanganana mitsangana dia napetraka eo amin'ny fotony, izay mila apetaka amin'ny tany mba hiantohana ny fitoniana amin'ny fantsona radial.
2 Ny sandry radiale
Ny sandry radial nitaingina ny tsanganana mitsangana mba hanohanana ny hetsika havia sy ankavanan'ny boaty spindle. Ny sandan'ny radial dia azo soloina manodidina ny tsanganana ary io no ampahany lehibe amin'ny fandavahana tanana, izay mety ho hitan'ny mpandraharaha arakaraka ny toerana hametrahana milina.
3 Ilay tsanganana
Ny tsanganana miorina amin'ny fotony dia manohana ny fivezivezena amin'ny sandry radial. Ny visy firaka dia afaka mitondra ny tsanganana miakatra sy midina
Boaty 4 Spindle
Ny bokotra fiasa lehibe dia napetraka eo amin'ny boaty spindle. Ny mpandraharaha dia mifehy ny fihodinan'ny boroka amin'ny alàlan'ny boaty spindle.
Latabatra mihetsika 5
Mifindra ny latabatra fiasana miaraka amin'ny alàlan'ny T amin'ny alàlan'ny fanamboarana workpiece
Misy motera roa amin'ny ankapobeny, ny iray eo ambonin'ny tsanganana, tompon'andraikitra amin'ny fampiakarana ny sandry. Iray ambonin'ilay boaty spindle, tompon'andraikitra amin'ny fihodinan'ny spindle.